बिरामी बोकेको एम्बुलेन्सलाई तो”ड”फो”ड गरेर बिरामीलाई बोकेर अस्पताल लैजादै गरेको द”र्द”नाक दृश्य – Online Nepalaja
बिरामी बोकेको एम्बुलेन्सलाई तो”ड”फो”ड गरेर बिरामीलाई बोकेर अस्पताल लैजादै गरेको द”र्द”नाक दृश्य
February 4, 2021 102
बिरामी बोकेको एम्बुलेन्सलाई तो”ड”फो”ड गरेर बिरामीलाई बोकेर अस्पताल लैजादै गरेको द”र्द”नाक दृश्य ??
आज सामाजिक सञ्जालमा यो तस्बिर देखेर सबैको मन नै रू”हा”एको छ। आज प्रचन्ड – नेपालले गरेको बन्दमा एक बिरामी बोकेको एम्बुलेन्सलाई पनि तो”ड”फोड गरेर छन् ।
तोडफोड गरे पछि आफ्नु पिठ्यूमा एक बिरामीलाई बोकेर अस्पताल तर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। उक्त फोटो सामजिक सञ्जालमा देखें पछि सबैको मनमा एउटै प्रश्न उब्जिएको छ ” आखिर यो बन्द केका लागि?”
नेता जाती चिल्ला गाडी र स्कुटर चडेर हिन्दा पनि कसैले केही नगर्ने तर एउटा बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स माथि चि किन गरियो तोडफोड ।
आजको यस दृश्य भोलि तपाईँ हामीलाई पनि त पार्न सक्छ नि।
पशुपति परिषदबाहिर रहेको सवारी पार्किङमा साधन राखेर भित्र प्रवेश गरेलगत्तै विभिन्न ठाउँमा सवारी साधन प्रवेश निषेध भनेर लेखिएको पोस्टर टाँसिएको थियो।
तर, जति नैतिकताको भाषण गरे पनि हामी ब्ववहारिक भने छैनौं। आफ्नो सहजताका लागि पशुपति मन्दिरको छेउसम्मै सवारी साधन लैजानेको ठूलै ताँती थियो ।
पशुपति पुग्दा आरती सुरु भइसकेको थिएन। मानिसहरुको चाप बढ्दो थियो। म पुलमा बसेर त्यही भीड हेरिरहेको थिएँ। यता बाग्मतीको किनारमा लास जलाइरहेका थिए, पशुपतिअगाडि आरती हेर्ने मानिसहरुको हुल थियो। मानिसको जीवन के नै छ र ?
कुन दिन मर्ने अत्तोपत्तो छैनझैं लाग्यो, एकछिन त्यही जलाइरहेको लास हेरिरहें। तर, त्यो पीडाभन्दा खुशी हुन त मानिसहरुको भीड नै उपयुक्त लाग्यो।
एकछिनमा आरती सुरु भयो। त्यो धुन, त्यो घण्टीको आवाज अनि त्यो आरती देख्दा र सुनिरहँदा सबै पीडा यतै सकिन्छ कि भन्ने भइरहेको थियो, सबै भक्तालुहरु त्यसैमा रमाइरहेका थिए।
वाचकले भक्तजनलाई ताली पिट्न आग्रह गरिरहेका थिए, सबै खुशीसाथ ताली पिटिरहेका थिए। मन आनन्दित भइरहेको थियो।
राष्ट्रिय पत्रिका बाट।
Prevराहुल र स्मिताको बियोगान्त प्रेमले लिएको यस्तो मोडले सारा नेपालीको मन रोएको बेला सामाजिक संजालमा भाईरल बन्यो यस्तो भिडियो (हेर्नुहोस भिडियो)
Nextसपनामा मृत्यु भइसकेका मानिस आउनुका ९ संकेत
४ करोड मूल्यको दुर्लभ सुन्तला रंगको मोती भेट्टाएका गरिब माझी पक्राउ!